वरुणले दीपिकालाई सोधे– सधैं किन नाइट सुटमा ? दीपिकाले दिइन् यस्तो जवाफ
एजेन्सी– बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले कोरोना भाइरस सचेतनाका लागि इन्स्टाग्राममा राखेको तस्वीर अहिले निकै भाइरल भएको छ । उनले यो पोस्टमा खासमा जुस पिएको तस्वीर राखेकी थिइन् । अनि यसलाई सेयर गर्दै उनले कोरोना भाइरसको यो समयमा केही प्रोडक्टिभ काम गरिरहेको पनि बताएकी छिन् ।
तस्वीरमा दीपिका नाइट सुटमा छिन् । यही मौकालाई लिएर अभिनेता वरुण धवनले उनलाई प्रश्न सोधेका छन्– सधैं किन नाइट सुटमा ? अनि यसलाई रमाइलो मानेर हुनुपर्छ, दीपिकाले जवाफ फर्काएकी पनि छिन् । उनले लेखेकी छिन्– किनकि यसो गर्दा नै त म जुनसुकै समयमा पनि आनन्दले सुत्न सक्छु ।